हरेक काम दोहोर्‍याएर गर्नुहुन्छ ? ओसिडी हुनसक्छ - Complete Nepali News Portal
के तपाइ पनि हरेक काम दोहोर्‍याएर गर्नुहुन्छ ? मानिसलाई कहिले, कहाँ, कति बेला कुन रोग लाग्छ भन्ने कुराको टुङ्गो हुँदैन । ओसिडी अर्थात् अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर एक प्रकारको मनोरोग हो । यो रोग जो कोहीलाई जुन सुकै अवस्थामा पनि लाग्न सक्छ । मनोविदका अनुसार यो प्राणघातक नभए पनि यसको अन्य मानसिक रोगको जस्तो उपचार विधि पनि छैन ।
वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डा. सुनयना यादवका अनुसार, यस्तो रोग लागेको मानिसमा एउटै कुरा मानमा बारम्बार खेलिरहने र त्यही कुरो हो वा हैन भन्ने दोधार मनमा रहिरहने हुन्छ । यस्तो रोगले मानिसको दैनिकीमा कस्तो असर गर्छ त ? जानाैँ ।
पुरा जानकारी भिडियोबाट
डा. सुनयना यादव